Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 13 Maya | Site na Linux
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 13 Maya
Oge ọ bụla ha dị ọzọ na ndị ọrụ nke nkesa a ị maara gbasaa de Ubuntu ma were obere ụzọ dị iche. Na ụdị ọhụụ abịa na ụfọdụ ozi ọma, ihe kachasị mkpa bụ nkwado ya ogologo oge ma ọ bụ LTS.
Ihe ụfọdụ ị ga-atụle tupu ịmalite ntuziaka bụ ihe ndị a:
Mgbe anyị kọwasịrị isi ihe ndị a, anyị na-aga n'ihu depụta ụfọdụ ihe nwere ike ime ka ndụ dịkwuo mfe ma anyị wụnye ọhụụ Maya ọhụrụ:
2 2. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala eserese
7 7. Wunye ngwa mgbakwunye
8 8. Wụnye Gparted
10 Clear oghere
2. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala eserese
Na NchNhr- Mmasị> Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ anyị nwere ike imelite ma gbanwee (ọ bụrụ na-ịchọrọ) onye na-anya ụgbọ ala eserese anyị nwere.
sudo apt-get install laguage-pack-gnome-en asụsụ-ngwugwu-na asụsụ-mkpọ-kde-en libreoffice-l10n-en thunderbird-locale-en thunderbird-locale-en-thunderbird-locale-en-ar
Ọ dị mkpa ime ya site na njedebe ma ọ bụghị site n'aka ndị njikwa ọ bụla, ebe ọ bụ na anyị agaghị enwe ike ịnabata usoro ojiji na ha.
Na mgbakwunye na nnukwu ọbá akwụkwọ nke egwuregwu nke ebe nchekwa nwere, anyị nwekwara http://www.playdeb.net/welcome/, ibe ọzọ bụ ọkachamara na ịnakọta egwuregwu maka sistemụ Linux na nchịkọta .deb. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu Windows anyị, adala mba, ebe anyị nwere ụfọdụ ndị ọzọ:
7. Wunye ngwa mgbakwunye
Offọdụ n'ime ha, dị ka Gstreamer ma ọ bụ Timidity, ga-enyere anyị aka ịgbasa anyị katalọgụ nke na-akwado formats; a na-ahụ ha abụọ na Mmemme njikwa ma ọ bụ nwee ike ịwụnye site na iji iwu sudo apt-get install. Anyị na-ekwupụtakwa ngwanrọ pulseaudio-equalizer, nwere ike inye anyị nhazi Pulse Audio ma melite ogo ụda; iji wụnye ya anyị ga-eji iwu 3:
sudo apt-nweta wụnye pulseaudio-nhazi ụda
8. Wụnye Gparted
O kwere omume na ụfọdụ nrụnye akụrụngwa a na-efu efu dị ka ọ bara uru mgbe ọ na-ejikwa ngalaba nke diski anyị. Inwe ya na nkesa anyị dị mfe dị ka ịpị sudo apt-nweta wp gparted ma ọ bụ site na Mmemme njikwa.
Ọ dịghị mkpa, mana ọ bụrụ na ọ dị oge anyị chọrọ ihichapụ ebe nchekwa nke usoro anyị na-emeghe ọnụ ma dee ihe ndị a: su - (ga-abụ mgbọrọgwụ) wee kwuzie 3> / proc / sys / vm / drop_caches. Usoro a abụghị mbibi, mana a ka na-atụ aro ka ị gụọ amaokwu ndị ọzọ na ịntanetị, dịka ọmụmaatụ: http://linux-mm.org/Drop_Caches
Daalụ Juan Carlos Ortiz maka onyinye!
Nwere mmasị na nye onyinye?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 13 Maya
Ihe 37 kwuru, hapụ nke gị
Uru ọzọ bụ na cοnsistent fаcial mаsκs
ga-enyere gị aka avoiԁ cοmmon ѕkin beneгderѕ,
tinyere hеlp maκe ị na-ele anya na feеl yοunger.
Еzọ eriri na isi ihe na
сheap fаcial maskѕ bụ nke dị nnọọ ala qualіtу
ma nwee ike iwe iwe na akpụkpọ gị. Na
anụ ahụ na-anwụ anwụ na-ejupụta ωith κerаtіn, na -emepụta akwa nchekwa.
Chọta ebe nrụọrụ weebụ m nkpuchi ihu nkpuchi
Aghọtaghị m otu anyị si aga n'ihu na-egwu mmiri megide nke ugbu a na windo enweghị ike ya na ihu igwe ya, m na-etinye lint Linux ma enwere m ike ịme ihe niile m mere tupu enweghị nbudata, (na-echere mgbasa ozi), na-agba ma chere njehie. Ezigbo mma maka Linux mint, daalụ
onye maara ka esi ejikọ lint lint na netwọọdụ wifi, ma ọ bụ budata ya
ọkwọ ụgbọala si na windo ebe ọ bụ na Linux m enweghị internet?
Esteban Ramos kwuru dijo
Ọ na-eche na ọ na-achọpụta na-akpaghị aka na netwọk gị na ị na-etinye isi, ọ dịghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla dịka ọ dị na windo. Chek pụọ
Zaghachi Esteban Ramos
Nwere ike ịgwa m igodo maka na eziokwu bụ na amaghị m ma ọ bụ nke m nwere na email m ma ọ bụ na m ga-eme nke ọhụrụ. Daalụ gị n'ọdịnihu ma nwee mwute maka amaghị ama m
Nzaghachi nye maria del carmen
Daniel✠lǝıuɐD ツ ▲ dijo
screenshots na xp, anya, asaa ... anyị na-aga na niile ... ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ site na peeji nke na ule na-egosi ya
Zaghachi Daniel✠lǝıuɐD ツ ▲
N'ebe 7 iwu nke mbu adighi nma. Nke ziri ezi bụ:
Zaghachi Victor Gomez
Achọpụtala m na ị na-eji Mint 13 dị ka isi usoro na PC gị, yana n'ụzọ m masịrị peeji a, mana n'oge na-adịbeghị anya enwere m ụfọdụ nsogbu na mbipụta a nke nkesa a na-ekwukarị banyere ọtụtụ ma e wezụga na ebe nkesa; Nsogbu a doro anya na ọ bụ njehie cinnamon nke na-agbazi kpamkpam mgbe ị na-eji libreOficce, ọ bụ ezie na ọ mere m akpan akpan na-ejighị ya na naanị ihe na-anọgide na-arụ ọrụ bụ pointer pointer na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ọ bụla enweghị ike ime ka ị pụọ na ọgba aghara a pịa bọtịnụ Malitegharịa ekwentị nke PC ma ọ bụ na nke m jiri igodo igodo: alt + inprPant ma dee REISUB, ebe ị bụ onye ọrụ nke distro a, m ga-ajụ gị ma nke a emeela gị ma ọ bụ nụla banyere nsogbu a , ma ọ bụ ikekwe ịrara otu isiokwu na ihe ngwọta nke njehie a n'ihi na ọ dịkarịa ala m ga-alaghachi na mbipute gara aga n'ihi na enweghị m ike ịchọta azịza ya, Daalụ.
Ndewo, m na-eji Linux Mint 13 nwere 64-bit Mate… enweghị nsogbu ụbọchị 15 gara aga. Yesnyaahụ m arụnyere na proprietary ọkwọ ụgbọala nke ihe na hd 6750, magburu onwe. Ọ dị mma. Cinnamon na-amasakarị m, ọ gbalịghị ya, mana ọ masịrị m karịa. M wụnyere di ma ọ bụ nwunye n'ihi na m gụrụ na cinnamon dị obere. Nke ahụ ga-abụrịrị ihe kpatara ya, echere m na ị ga-elegharị anya ruo mgbe ọ ka mma, ma ọ bụ gaa na nwunye ma ọ bụ oche ọzọ. Ihe obula otu ihe ntanye Linux bu nke magburu onwe ya, agaghi m eji ubuntu, ma obu debian, ma obu arch ... n'ezie, ana m ekwu site na ahuhu m, na nkwanye ugwu zuru oke nye ndi choro ndi mmadu a, na-enweghi ihe omuma. M na-anabata ndị obodo nweere onwe ha. Chika Okpala
Louis escobar dijo
Echere m na onyinye ahụ dị mma =) Daalụ ... gaa n'ihu otu a, akwụsịla iji Linux, ọ bụ ihe kachasị mma =)
Zaghachi Luis escobar
hello Gorgon .. lee m na-eji cinnamon na Mint 13, na naanị nsogbu m nwere bụ na desktọpụ desktọọpụ (m ga-arụnye Wallch iji chịkwaa ya) nke anaghị arụ ọrụ maka m na ọnọdụ akpaka - ọ gbanwere n'oge niile nke ụbọchị- yana enweghị nhazi menu na-egosi, nke ma ọ bụrụ na ọ na-eme na di na nwunye.
Ugbu a, enwere m 13-bit Mint 32 arụnyere ma nwee nsogbu ụfọdụ na site n'ọtụtụ ịgụ ebe ahụ -google- ọ naghị atụ aro ka ịwụnye 32 na igwe 64-bit, Otu nwere uru ya karịa nke ọzọ ma nwee ezi uche na ya ekwesịghị ikwe ka ihe ọ bụla mee, ma ọ bụghị ya, ọ ga-adị mfe, mana ọ na-eweta ụfọdụ nkasi obi. Mgbe ahụ, m tinyere ihe dị ọcha na 64 ma dozie nsogbu ndị ahụ, yana nke a ka m na-erite uru ma na-erigbu akụrụngwa nke akụrụngwa kachasị (ihe na-anaghị eme na 32 n'ime 64) na nsogbu bụ na enweghi ọtụtụ Nkwado maka 64 Mana dịka m gwara gị, emere m nsogbu niile m nwere na mbụ, otu ihe ahụ bụ na Mate ma ọ bụ Cinnamom (Cinnamon).
Nke a bụ maka gị iji nyochaa ụdị igwe ị nwere na ụdị nhazi ị na-eji, ma eleghị anya nsogbu ahụ na-aga ebe ahụ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na Pablo nwere ndụmọdụ ka mma karịa m, mana na nke m, m na-eji nsụgharị ya na MATE dị ka gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ọ siri ike ma na-enwekarị nsogbu karịa Cinnamon (ọ bụghị n'ihi na ọ na-akatọ gburugburu ebe ị na-eji) . Otu ndụmọdụ ga-abụ ịgbanwe gaa na MATE iji hụ ma edozila nsogbu gị, n'ihi na ugbu a bụ oge mbụ m nụrụ banyere nsogbu dị ka nke a
ọ bụ otu ihe ahụ maka Cinnamon ọ bụghị ya ???
Hey, m mere njehie na »bulie SystemExit» Amaghị m ihe kpatara ya? ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na nke ahụ ..
Uchenna Onyekwere dijo
Daalụ, zuru oke 😉
Lelee anya nke oma, agbazigoro m okwu ato, obughi nani ihe ndi ozo ff A «laguage» na «asụsụ» ...
Site n'ụzọ, post ahụ bara ezigbo uru, daalụ nke ukwuu!
Okenye Calderon dijo
M ka na-ahụ ọtụtụ nke njehie ma ọ bụrụ na i nwere ike idozi ha biko!
Dị ka anya a: sudo apt-nweta ịwụnye -age-pack-gnome-es
Ọ bụ asụsụ
Zaghachi Juniors Calderon
Ndewo, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịwụnye dnie na nkesa a, soro usoro ndị dị na ibe a, http://bitplanet.es/manuales/3-linux/324-instalar-lector-dnie-en-ubuntu-1210.html, Agbalịrị m ya ma ọ rụworo m ọrụ na-enweghị nsogbu.
Zaghachi Pepe Wasquez
Kedu ka o si dị mma ịgụ ahịrị gị. 🙂 Anyị niile na-enweta otu ihe. Nabata na obodo Linux.
Blue Nseta nke Ọnwụ? Ọfọn, ị na-eji Windows 98 n'ezie! Ebe ọ bụ na Windows XP ihe ndị a adịkwaghị adị, belụsọ na ị bụ onye ọrụ Windows Vista nwere ogologo ntachi obi, mana nke ahụ nwere azịza: Windows 7 🙂
Ace nke spades dijo
Na Windows 8 ha laghachiri ... 😉
Zaghachi Ace nke Spades
Ezigbo peeji, daalụ maka inyere ndị anyị si Windows kwaga ... Mụ na ihu igwe na-acha anụnụ anụnụ gwụrụ m ike ... Agbalịrị m ọtụtụ distros maka ọnwa 5 iji mara onwe m ma chọpụta nke kachasị m mma na ụdị m chọrọ m wee hapụ LinuxMint 13 kpamkpam 64-bit KDE ma ọ dị mma… Achọtala m ihe niile enwere ike ịme wee kwụsị dabere na ndị sitere na Redmond, naanị ịgwa ha na ịwụnye Mmanya enweghịdị anya m… na Linux enwere ihe niile maka otutu.
Zaghachi Ghermain Blue
Eze Leonidas dijo
M na-enwe mmasị na Cinnamon, enwere m naanị obere nsogbu na nseta ihuenyo ahụ na mgbe mmelite kwụsịrị igosipụta igbe nzaghachị ma chekwaa njide na / Foto.
Nsogbu ọzọ edozi bụ ịgbanwe GDM ... ọ bụrụ na ibudata isiokwu GDM ọ naghị amata ya, otu esi eme ya bụ ịgbanwe aha ihe niile GDM tinyere MDM na voila ọ na-arụ ọrụ ... M hapụrụ gị edemede nke na-eme ya na akpaghị aka (ọ bụghị nke m mana ọ na-arụ ọrụ),
#! / usr / bin / env eke
# Gbanwee isiokwu GDM gaa MDM site na esteban1uy
pygtk. chọrọ ('2.0')
ọ bụrụ gtk.pygtk_version <(2,3,90):
def look_in_directory (ndekọ):
maka f in os.listdir (ndekọ):
ma ọ bụrụ na os.path.isfile (os.path.join (ndekọ, f)):
ma ọ bụrụ na f == "GdmGreeterTheme.desktop":
laghachi os.path.join (ndekọ, f)
ọ bụrụ os.path.isdir (os.path.join (ndekọ, f)):
ọ bụrụ na look_in_directory (os.path.join (ndekọ, f))! = "":
dialog = gtk.FileChooserDialog ("Họrọ faịlụ isiokwu",
iyo = gtk.FileFilter ()
filter.set_name ("Faịlụ niile")
nzaghachi = dialog.run ()
ọ bụrụ nzaghachi == gtk.RESPONSE_OK:
ebePath = tempfile.mkdtemp () + "/"
tar.extractall (ebe ụzọ)
GdmFile = look_in_directory (ebe njedebe)
ma ọ bụrụ na GdmFile! = "":
o = oghe (GdmFile + »/ MdmGreeterTheme.desktop», »a»)
maka akara na emeghe (GdmFile + »/ GdmGreeterTheme.desktop»):
akara = akara. ebe ("GdmGreeterTheme", "MdmGreeterTheme")
newtar = tarfile.open (fullpath + "/ + innerfolder + _for_MDM.tar.gz", "w: gz")
newtar.add (GdmFile + »/», n'ime + + / /))
nzaghachi elif == gtk.RESPONSE_CANCEL:
Ụzọ ọpụpụ ()
Zaghachi Eze Leonidas
Daalụ Juan Carlos maka onyinye. xD
N'okwu nke 3, gbasara ịwụnye ngwungwu asụsụ, enwere mmejọ mmeghe nke na-ebute njehie: Thezọ ziri ezi ga-abụ
sudo apt-nweta ntinye-ngwungwu-gnome-en asusu-ngwungwu-asusu-pack-kde-en
libreoffice-l10n-en thunderbird-obodo-en thunderbird-mpaghara-en-en thunderbird-obodo-en-ar
Linux mint 13 bụ naanị versh! Laptọọpụ a nwere winbugs 8 na oge ọ bụla ihe nchọgharị ahụ ga-akpụkọta ma echefughị ​​na m ga-akwụ ụgwọ ikikere!. Ma ndị Maya gbachiri nkịtị site na mbara igwe ...
Naanị na Linux ịchefu banyere serials, cracks, antivirus, ikikere, ịchọ mmemme, dd defragmentation, reboots oge ọ bụla ị melite, njehie, ịwụnye ọkwọ ụgbọala, wdg wdg ... na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Maka m ọ bụ ihe ịtụnanya dị egwu ịchọta LinuxMint Maya nwere ọtụtụ afọ n'iji UBUNTU ọ bụ ezie na ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ maghị oke mana nke a dị oke mma, enwere m ya arụnyere Windows7 ọ naghị enye nsogbu ọ bụla. M wụnyere ya na Wiinmit4.exe na naanị ihe mgbe etinyere ya, anaghị m emelite ma melite iji melite anyị ga-ehichapụ ma ọ bụ mediubuntu ngwugwu na synaptic na m na-eme mmelite ahụ ma kwalite ọzọ na ọ na-arụ ọrụ zuru oke. ọ bụ ngwa ngwa mara mma na mfe iji. Ana m eme nke ahụ n'ihi na m gosipụtara na ọ meliteghị m nke ọma mgbe m jiri mmelite% kwalite.
Zaghachi Roberto Pombo
Mgbe m wụnye Linux Mint na diski ike ma mechaa n'ụzọ ziri ezi, mgbe m gbalịrị ịpụ site na diski ike usoro ahụ enweghị ike ịchọta OS. Kedu ihe m nwere ike ịme?
rute ugbu a ana m eme nke ọma, na sistemụ nrụọrụ a
ụgbọ mmiri dijo
ihe kpatara na enweghị m ike ịwụnye isiokwu na Linux mit 13 ọ na-agwa m gtk + awụnyebeghị auyda plis
Stellarium: na-ele igwe
Etu aga - edo Fedora: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara YUM ma ị maghị ịjụ (Nkebi nke M)